पहिलो पटक २ दिने बालिकाको स्वाब लिइयो - Khabarshala पहिलो पटक २ दिने बालिकाको स्वाब लिइयो - Khabarshala
पहिलो पटक २ दिने बालिकाको स्वाब लिइयो
तुलसीपुर । कोरोना संक्रमणको आशंकामा पहिलो पटक २ दिने जुम्ल्याहा बालिकाको स्वाब लिइएको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेकी महिलाबाट जन्मिएका हुनाले उनीहरुको स्वाब लिइएको हो । नेपालमा अहिलेसम्म स्वाब परिक्षण गरेको मध्ये उनीहरु नै सबैभन्दा सानो उमेरको भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य निरिक्षक विमल केसीले जानकारी दिए ।
जन्मतौल कम भएका कारण उनीहरुलाई एनआइसियुमा राखेर उपचार गरिएको पनि उनले वताए । उनीहरुको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा रहेकी महिलाबाट जन्मिएका जुम्ल्याहा बालिकाको पिसिआर परिक्षणका लागि स्वाब लिइएको छ । तुलसी अस्पतालमा उपचाररत बालिकाको स्वाब संकलन गरेर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्याइएको तुलसी अस्पतालका सञ्चालक डा. किशोर खत्रीले जानकारी दिए ।
२ दिन अगाडी क्वारेन्टाइनमा वसेकी अनिता यादवले उनीहरुलाई राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उनीहरुलाई जन्म दिएकी थिइन् । अनिताको भने पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको छ । बालिकाहरुको रिपोर्ट मंगलवारसम्म आउने राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा. वसन्त डाँगीले जानकारी दिए ।